💙 ချစ်သူကောင်လေးအတွက် အရိုးရှင်းဆုံး Skin Care လက်ဆောင် 💙 Skin Care ဆိုတာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုပြီး တွေးတတ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အမျိုးသားတွေလဲ Skin Care ပြုလုပ်လာကြပါပြီ .... ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးလဲ ခေတ်နောက်မကျသွားအောင် ရိုးရှင်းတဲ့ Skin Care တစ်ခုတော့ လက်ဆောင်ပေးသင့်တယ်နော် ဘယ်လို အသားအရေအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အသားအရေဆိုရင် Skin Barrier ကောင်းမွန်ပြီး အရေကြောင်းများလျော့နည်းကာ အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွတ်စေပါတယ်။ ဒီလို ထိရောက်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်ရှိတဲ့ Aqua New Skiin Luminous Sleeping Cream က သင့်ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးအတွက် အရိုးရှင်းဆုံး Skin Care လက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 🌙 ညအိပ်ယာမဝင်ခင် သင့်တော်တဲ့ ပမာဏကိုယူပြီး မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးပါ။ ရေပြန်ဆေးစရာမလိုပဲ အိပ်စက်အနားယူနိုင်ပါပြီ။ အိပ်စက်နေချိန်အတွင်းမှာ အသားအရေကို အာဟာရနှင့် အစိုဓာတ်ကို ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight 💤
မျက်နှာလေး စိုပြေပြီး Glow နေစေမယ့်အတွဲလေး ? ❄ဆောင်းရာသီလို ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာတောင် ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာလေး စိုပြေ ဖြူစင်နေပြီး Glow Glass ပြိုးပြိုးပြက် ဖြစ်နေစေမယ် ? ? Snail Wish Whitening Cream ရဲ့ ? Snail Mucus က အာဟာရဓာတ် နဲ့ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးတယ်။ ? New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream ရဲ့ ? Hyaluronic Acid က ရေဓာတ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်ပေးလို့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာလေးအတွက် အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် ? အရေပြား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး Sensitive Skin များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
❄️ဒီဇင်ဘာ ဆောင်းညမှာ Sleeping Cream နဲ့ ကောင်းစွာ အိပ်စက်လိုက်ပါ ☃ New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream က အိပ်စက်နေတဲ့အချိန်အတွင်း အသားအရေကို ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရနဲ့ အစိုဓါတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ တစ်ညလုံး အစိုဓါတ်ဖြည့်တင်းထားလို့ တစ်နေ့လုံး အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးနော် ? ရာသီဉတုကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ပြီး အသားပတ်တာတွေကိုလဲ သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရေခြောက်သွေ့သူများအနေနဲ့လဲ Sleeping Cream ကို မနက်ရော ညပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ Sleeping Cream ရှိနေရင် အားလုံး အိုကေပြီနော် ... ? Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
? Hyaluronic Acid ပါလို့ ရေဓာတ်ကို ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်... ? ❄️ဆောင်းရာသီလဲ ဝင်ပြီးဆိုတော့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ပြီး ကြမ်းတမ်း လာမှာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Cream ကောင်းကောင်း ရှာနေတယ်ဆို New Skiin ရဲ့ Aqua Luminous Sleeping Cream ရှိပါတယ်။ Sleeping Cream မှာ ? Hyaluronic Acid ပါဝင်လို့ အရေပြားကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အရေပြား ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ နေရာများကိုလည်း နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ ❄️ ရာသီဥတုကြောင့် အရေပြား ခြောက်သွေ့ထိခိုက်ခြင်း အရေပြားပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးကနေ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းလာစေပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အသားအရောင် ညီညာပြီး ဖြူဝင်းလာစေမယ် ? အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး အသားအရောင်မညီညာသူများ မျက်နှာလေး ဖြူဝင်းလာချင်တဲ့သူများအတွက် New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream လေးကို မရှိမဖြစ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ New Skiin Sleeping Cream မှာ ပါဝင်တဲ့ Niacinamide က အရေပြားဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးပြီး အရေပြားပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အသားအရောင်ကို ဖြူဝင်းလာစေပြီး အသားအရောင် ညီညာလာစေပါတယ်။ Hyaluronic Acid က အရေပြားကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းချင်သူများအနေနဲ့ကတော့ မနက်ရော ညရော အသုံးပြုနိုင်ပြီး Snail Wish Whitening Cream (သို့မဟုတ်) New Skiin All In One Tone Up Cream လေးနဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး အသားအရေ အမျိုးအစားတိုင်းအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ သတို့သမီးလောင်းလေး Glow Skin လေး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ? တစ်သက်မှာ တစ်ခါ ကျင်းပရတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ သတို့သမီးလောင်းလေးများ အလှဆုံးဖြစ်နေစေဖို့ New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream က တာဝန်ယူပေးပါရစေ။ ပင်ကို အသားအရေလေးကောင်းမှ လိမ်းခြယ်ရတဲ့ မိတ်ကပ်ဟာ အဆင်ပြေပြီး အလှဆုံးဖြစ်နေစေမှာပါ။ အသားအရေခြောက်သွေ့ပြီး ကြမ်းတမ်းနေမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်သားဟာ မျက်နှာတသားထဲ မကျပဲ မိတ်ကပ်တွေကွက်ပြီး ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ New Skiin Sleeping Cream ကို လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးလို့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး အရေပြား ကြမ်းတမ်းနေတဲ့နေရာများကိုလည်း နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ Skin Barrier ကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ပေးခြင်းကြောင့် ရာသီဥတုကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့ထိခိုက်ခြင်း၊ ခရီးပမ်းပြီး အရေပြားခြောက်သွေ့ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြားသော အရေပြားပျက်စီးခြင်းအမျိုးမျိုးကနေ အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းလာစေပါတယ်။ New Skiin Sleeping Cream ကြောင့် သင့်စိတ်တိုင်းကျ နုပျိုလှပတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင် သတို့သမီးလောင်းလေးဖြစ်ပြီပေါ့ ? Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၂၀,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?
သင့်အသားအရေကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲလာစေမယ် ? New Skiin Aqua Luminous Sleeping Cream က သင့်ရဲ့ အသားအရေကို ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲ သွားစေမှာလဲ❓ Sleeping Cream ကို အမြဲတမ်းပုံမှန် လိမ်းပေးသွားမယ်ဆိုရင် အသားအရေက ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာနဲ့ အစိုဓါတ်တို့ ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး အရေပြား ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ နေရာများကိုလဲ နူးညံ့ချောမွတ်လာစေပါတယ်။ အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေလေး စိုပြေပြီး အစိုဓါတ်ခမ်းခြောက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော် Sleeping Cream ဆိုလို့ ညဘက်ပဲ သုံးရမှာမဟုတ်ဘူးနော် ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းချင်သူများကလည်း မနက်ဘက် လိမ်းလို့ရပါတယ်။ Aqua Luminous Sleeping Cream (100 g) တစ်ဘူး - ၁၉,၅၀၀ ကျပ် Good Night Sleep Tight ?